Hooyada Cristiano Ronaldo: 'Sannadka Soo Socda Ronaldo Wuxuu Ku Laaban Doonaa Sporting Lisbon'
HomeWararka Ciyaaraha MaantaHooyada Cristiano Ronaldo: ‘Sannadka soo socda Ronaldo wuxuu ku laaban doonaa Sporting Lisbon’
May 13, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Cristiano Ronaldo hooyadiis ayaa sheegtay inay ku qancin doonto wiilkeeda inuu ku laabto Sporting Lisbon xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo ay jirto hadal heyn ku saabsan mustaqbalka tababaraha reer Portugal.
36 jirkaan ayaa qaab ciyaareed fiican ku qaadanaya Juventus xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 28 gool 32 kulan oo Serie A ah oo uu u saftay kooxda Andrea Pirlo , laakiin mustaqbalkiisa ayaa shaki ku jiraa iyadoo kaliya hal xilli ciyaareed uu uga harsan yahay qandaraaskiisa Old Lady.
Juve waxay halis ugu jirtaa inay seegto booska loogu soo baxo Champions League xilli ciyaareedka soo socda madaama ay haatan fadhiso kaalinta shanaad ee Serie A iyadoo labo kulan ay u harsan tahay.
, Ronaldo hooyadiis Dolores ayaa tiri: “Waxaan aadayaa Turin oo aan la hadlayaa, sanadka soo socda wuxuu ka ciyaari doonaa Alvalade, waan ku qancin doonaa wuuna soo laaban doonaa”.
Ronaldo ayaa soo maray nidaamka akadeemiyada ee Sporting Lisbon wuxuuna 31 kulan u saftay kooxda reer Portugal ka hor inta uusan u dhaqaaqin Manchester United 2003.
Weeraryahankan halista badan ayaa ku soo biiray Juve sanadkii 2018 wuxuuna dhaliyay 100 gool wuxuuna kooxda u diiwaan galiyay 22 caawin.